Deetaa daangessaaf dirqalee alaagi qindeessa.
Qindaa'ina arfii faayilii alaagame keessatti fayyade ifteessi.
Qindaa'inoota maxxansaa wardiileedhaaf ifteessa.
Tarree iddoo alaagii jalqabuu barbaaddu ifteessi. Tarreen foddaa durargii keessatti qaaqa jalatti ni mul'ata.
Deetaan kee gargareessoota ykn dalgeewwan dhaabbataa akka daangeessatti fayyadamuu isaa ifteessa.
Deetaa dalgee-dhaabbataa (lakkofsa arfiiwwan walqixaa) sarjoota keessatti gargarbaasa. Sarartoo foddaa durargii keessa jiru irratti cuqasi dalgee qindeessuuf.
Gargarbaasaa deetaa kee keessatti fayyade fili.
Deetaa daangeffame gurroon tarjoota keessatti gargarbaasa.
Deetaa daangeffame Xumurlaphiiwwaniin tarjoota keessatti gargarbaasa.
Deetaa daangeffame qoodduun tarjoota keessatti gargarbaasa.
Deetaa daangeffame iddooleedhhan tarjoota keessatti gargarbaasa.
Daangessitoota walitti aanan makuu fi derroota deetaa duwwaa haquu.
Waliigala PDF dirqaalee aleergii qindeessa.
Tarjaa keessatti yommuu deetaan kee gargarbahu maal akka fakkaatu mul'isa.
Tarjaa foddaa durargii keessatti filiitii akaakuu deetaa deetaa alaagame fayyadu fili. Filannoowwan armaan gadii keessaa tokko filachuu ni dandeeassa:
LibreOffice akaakuu murteessi.
Deetaan alaagame akka barruutti ilaalama.
Dhangii guyyaa (Guyyaa, Ji'a, Waggaa) fayyadami tarjaa deetaa alaagame keessatti.
Dhangii guyyaa (Ji'a, Guyyaa, Waggaa) fayyadami tarjaa deetaa alaagame keessatti.
Dhangii guyyaa (Waggaa, Ji'a, Guyyaa) fayyadami tarjaa deetaa alaagame keessatti.
Dhangiin lakkofsaa Ingiliffa US ti ni barbaadama sirna afaanicha ilaalchisee ni dabalatama. Dhangiin lakkofsaa hin fayyadamu. Yoo afaan US galfanni jiraachuu baatee dhangiinWaaltina tu fayyada.
Deetaan tarjaa irraa hin alaagamu.
Yoo dhangii guyyaa (DMY), (MDY), yookan (YMD) tokko isaa filatte fi lakkoofsa daangessaa guyyaa malee galchite lakkoofsi akka armaan gadiitti hiikama:
Arfiin lama tokkoon tokkoo guyyaaf, ji'aaf fi waggaaf tartiiban filamaniin fudhataman.
Arfiin afur waggaadhaaf fudhatameera, tokko tokkoon lamaa ji'a fi guyyaaf tartiibaan filataman.
5 ykn 7
Akkuma arfii 6 yookan 8, garuu tartiibni arfii tokkoo gadi qaba. Kun dursaa duwwaa ji'aa fi guyyaa haqa.
Deetaa alaaguu barbaadde keessa duwwaa dursab yoo keessa oolchuu barbaadde, lakkofsa bilbilaa fakkeenyaaf, Dhangii " Barruu" tarjaatti fayyadami.
Bal'ina murataa'e fayyadamuun deetaa alaaguu gara tarjaatti adda baasuu yoo barbaadde, daangaa bali'inaa qindeessuuf sarartoo irratti cuqaasi.
Naanna'iinsa Hantuuttee Malee
Odeeffannoo irra caaluuf, Odeeffanno waa'ee alaaguu fi alergii gingilcha ilaali.
Title is: Alaagii Barruu